pliz ငါ့ကို pixels ကို 10H15 နှင့် 15H18 အတွက်ဓာတ်ပုံများကို၏အရွယ်အစားကိုပြောပြ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
သူများသည်သူကပြောတယ်အရင်းရှင်စက်အဘယျသို့စင်တီမီတာနားလည်မထားဘူး။ ထို့ကြောင့်, အဘယ်အရာကိုပုံပျက်ခြင်းမရှိဘဲပုံနှိပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းလက်မသို့မဟုတ် pixels ကိုဖြစ်စေများတွင်သတ်မှတ်ထားသောရမည်ဖြစ်သည်။ မေးရန် (ဒီအသုံးအများဆုံးဖြစ်တယ်) သင် 300 dpi resolution နဲ့ print ထုတ်ကြောင်းယူဆ:
Resolution 10xpi ရှိသည့် 15x1200 - 1800x300 pixels ။ ဒါက 4x6 လက်မ ဒါကအရွယ်အစားအတိအကျပါ။
သို့မဟုတ် ၁၀.၁၆ x ၁၅.၂၄ စင်တီမီတာခန့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် "ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်" တွေ့မြင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
၎င်းသည်သီအိုရီအရအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့သင်က LAB ရှိဖုန်းသို့မဟုတ်ဆပ်ပြာသေတ္တာတစ်ခုမှဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုရိုက်ပြီး "ငါက 10x15 ပါ" လို့ပြောတယ် ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ပါ။
အဲဒါဟာ "ကျန်းမာအောင်လုပ်ပါ" လိုပဲ။
File-New ကိုနှိပ်ပါ။ ဖွင့်လှစ်သော window တွင်, စင်တီမီတာအတွက်ယူနစ်နှင့်တစ်လက်မလျှင် pixel အတွက်သင့်ဓာတ်ပုံ၏စင်တီမီတာ (ဥပမာ 10x15) resolution ကို (ဥပမာ 300) ကိုသတ်မှတ်။ မေးလား အခုတော့စင်တီမီတာအစား resolution ကိုပြောင်းလဲစရာမလိုဘဲတစ်လက်မတိုင်းတာသော pixels ပမာဏယူနစ်ကိုသတ်မှတ်ပါ။ 10x15 ရှိသည့်နေရာတွင်သင်ပုံသည်အမြင့်နှင့်အကျယ်အရသင်ယခင်ကသတ်မှတ်ထားသည့် pixel တွင်ပြထားသည့် resolution အရပေါ်လာလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်, သင်တို့၏ရုပ်ပုံများ 300 pixel အရွယ်အစားတစ် resolution ကိုအနည်းဆုံးလိုက်နာရမည်:
သငျသညျပရင်တာပေါ်ဓါတ်ပုံတွေကို print ထုတ်ဖို့အဆင်သင့်မဟုတျပါလျှင်မူကားသင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို?
သငျသညျကိုသာစံပုံစံ၏စင်တီမီတာအတွက်အရွယ်အစားနှင့်စာနယ်ဇင်းအပေါ် resolution ကိုမကြာခဏအမြဲတမ်းသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည် minilab မှာ, လက်မနှုန်း 300tochek ။
"ပုံ၏ pixels အရွယ်အစား" သည်သင်ဆုံးဖြတ်မည့် resolution ပေါ်မူတည်သည်။
ပုံမှန်တန်ဖိုး ၁၅၀ နှင့် ၃၀၀ dpi (တစ်လက်မအစက်များ) ဖြစ်သည်။
ဓာတ်ပုံ Lab မှခုနှစ်တွင်များသောအားဖြင့်ကျနော့်အမြင်ရှိ 300 ပုံနှိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
2.54 အပေါ်တပ်မက်လိုချင်သောအစှဲရဲ့အရှည် / width ကို Divide (လက်မရဖို့) နှင့် resolution ကိုအားဖြင့်များပြား။
ဒီတော့ 6x20 ကို 30MP နဲ့ပုံနှိပ်တယ်။ နံရံပေါ်မှာချိတ်ဆွဲထားဖို့ဘာမှမဖြစ်လာဘူး
လက်မနှုန်း razresheniem152pikseley နှင့်အတူ 102 300mm မှတက် norittsu ဥပမာအပေါ်ဓာတ်ခွဲခန်းလျှင်မီလီမီတာ 152 အပေါ်အသီးသီး 180mm, အလိုရှိသော resolution နဲ့ပြသနှစ်ဆပိုများလာသင်သည်သင်၏ .zachem pixels ကို print ထုတ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာနေသော်လည်း
မည်သူမဆို pixels ကိုအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်! ပုံ၏ဆုံးဖြတ်ချက်မူတည်ပါသည်။
ဓာတ်ပုံဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ပုံနှိပ်ရန် - ၁၅၀ t / လက်မမှ ၁၀ စင်တီမီတာလျှင် ၆၀၀ t (၁၅ - ၉၀၀ အသီးသီး) မှဖြစ်သည်။ သင်ဆက်ဆက်ပိုပြီးနိုင်ပါတယ်
67 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,292 စက္ကန့်ကျော် Generate ။